प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री चर्चा - Marganugami Daily
Marganugami Daily Interview प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री चर्चा
प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री चर्चा
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदेशसभा सदस्य शैलेन्द्रप्रसाद साह यति बेला प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चामा छन् । मधेशका अत्यन्त लोकप्रिय एवं शालीन कुशल संगठक साहसँग हामीले ‘मुख्यमन्त्री चर्चा’ अन्तर्गत कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत कुराकानी ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन परिणामलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो अपेक्षित र आशातीत परिणाम हो । हामीले चुनावलाई संविधान संशोधनमार्फत मधेशी जनताको अधिकार स्थापित गर्ने र समृद्धिको एउटा नयाँ मार्गप्रशस्त गर्ने जनमत बटुल्ने अर्थमा लिएका थियौं । जसमा बहुसंख्यक जनताले माननीय उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मधेशको समृद्धिका लागि अघि बढ्ने मत अभिव्यक्त गरेका छन् । हामीप्रति जनताले गरेको असीम र अतुल्य विश्वास एवं भरोसाका लागि हार्दिक कृतज्ञता पनि प्रकट गर्दछौं ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालको यो चुनावी सफलताका कारण केके छन् ?
हेर्नुस, कुनै पनि संघर्षमा राजनीतिक दल, मोर्चा र जनशक्ति परिचालनको महत्वपूर्ण अर्थ रहन्छ । दलीय दृष्टिले हाम्रो पार्टीका नेताकार्यकर्ताहरू आफ्नो राजनीतिक मार्गचित्रमा प्रस्ट थिए । राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्न हामीसँग स्पस्ट रणनीति थियो । र, नेताकार्यकर्ताहरू अथक, अडिग र अविचलित भएर अहोरात्र जनतामाझ पार्टीको धारणालाई स्थापित गराए । यी जम्मै काम हामीले पार्टी अध्यक्ष आदरणीय उपेन्द्र यादवज्यूको कुशल र दूरगामी प्रभाव पार्ने नेतृत्वको छहारीभित्र बसेर गर्यौं । मलाई लाग्छ, यिनै कारणले हामी चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भएका हौं ।
तपाईंले मोर्चाको कुरा पनि गर्नुभयो ? फोरम–राजपा तालमेलको प्रभाव कस्तो रह्यो ?
परिणामले नै भनेको छ । तालमेल सफल र सार्थक भएको छ । यो एक खालको राजनीतिक अभ्यास पनि थियो । सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्वका आधार मा काम गर्ने प्रवृत्तिको स्थापना पनि । त्यसैले सफल नै भयो भन्नुपर्छ । यद्यपि अझै सशक्त र प्रभावकारी परिणाम आइदिएको भए हामीलाई थप हौसला प्राप्त हुन्थ्यो ।
तालमेल पार्टी एकीकरणको पूर्वाधार हो ?
मधेशको जनमतले तालमेल लाई स्वीकार गरेकै छ । तर, दुवै पार्टी फरकफरक चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्नु भनेकै दुवै पार्टीको आ–आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको बोधक हो । त्यसैले जनमतले दुवै पार्टीको अस्तित्व लाई स्वीकार गरेको अवस्था हो । रह्यो पार्टी एकीकरणको सवाल भने हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूले प्रस्ट भनिएको छ कि सिद्धान्त, उद्देश्य र कार्यनीतिको समानताका आधारमा कुनै पनि पार्टीसँग एकीकरण प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । त्यसैले तालमेललाई किटेरै एकीकरणको पूर्वाधार त म भन्दिनँ, तर यो एउटा सुरुवात हुन सक्छ ।
केन्द्र र प्रदेशको सत्ता समीकरणमा त फोरमको ठूलै भूमिका देखियो नि ?
हो, जनमतले आज हामीलाई धेरै अर्थमा निर्णयक बनाएको छ । सत्ता समीकरण अमूर्त कुरा होइन, यो जनमतप्रतिको सम्मान पनि हो । जुन दलहरू जुन भूमिकाका लागि जनताबाट अनुमोदित भएका छन, ती दलले प्राप्त गर्ने भनेकै उही हैसियत हो । हामी सत्ता समीकरणको कुन विन्दुमा रहन्छौं भन्ने कुरा अन्य दलहरूको भूमिकामा पनि भर पर्छ । तर, यो निश्चित हो, जनसंघर्षको कठोर बाटोबाट जनताका नेता बनेका हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यूको राजनीतिक उचाइ लाई यो निर्वाचन परिणामले अझै शिखरमा पुर्याएको छ । उनको कुशल, दुरदर्शी र धैर्यवान् नेतृत्वका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेश निर्णायक भएको अनुभूति गर्दैछ । यसको प्रभाव विस्तारै हेुर्नेछ । तर, आज हाम्रो अध्यक्षज्यू अन्य दलबाटै प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित भइरहेको छ । यो राजनीतिक उपलिब्धलाई हामी ‘इन्जोय गरिरहेका छौं ।
त्यसो भए उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ ?
हेर्नुस, म आदरणीय अध्यक्षज्यू सँग पहिलो मधेश आन्दोलनभन्दा पूर्वदेखि नै राजनीतिक रूपमा दीक्षित भएको र उनको सामीप्य प्राप्त गरेर आन्दोलन, विद्रोहमा सहभागी भएको मानिस हुँ । संगठन निर्माण र विस्तारको सुक्ष्म तरिकाहरू सिकेको मान्छे हुँ । उनको नेतृत्वदायी क्षमतालाई बुझेको मानिस म । म सधैँबाट भन्दै आएको छु कि देशको कार्यकारी जिम्मेवारी हाम्रो अध्यक्षज्यूले प्राप्त गरे भने जनअपेक्षाअनुसार देशको मुहार नै फेरिनेछ । यो निर्वाचनपूर्व पनि प्रस्ट ढंगले भनेको थिएँ कि निर्वाचन परिणामले उनी प्रधानमन्त्री बन्ननेछ । आज हामी त्यसको दैलोमा उभिएका छौं । साइत जुर्यो भने हामी कुनै बेला घरमा हुनेछौं ।
प्रदेश २ मा फोरम नेतृत्वकै सरकार बन्ने सम्भावना छ । तयारी के भइरहेको छ ?
हो, जनताले फोरम नेतृत्वको सरकारका लागि मतादेश दिएको अवस्था हो । तर, अझै केही कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया बाँकी छन् । ती प्रक्रिया पूरा भएपछि सरकार गठनका लागि गृहकार्य थप तीव्र बन्नेछ ।
मुख्यमन्त्रीका लागि धेरैको नाउँ चर्चामा छ । को बन्दैछ मुख्यमन्त्री ?
हेर्नुस, अहिले प्रदेशसभा सदस्य नै टुंगो लागेको छैन । एकाध दिनमा प्रदेशसभा सदस्य संख्याले पूर्णता पाउनेछ । अर्थात् समानुपातिकतर्फबाट आउने प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । त्यसपछि पार्टीको आफ्नै स्थापित विधि र मान्यताअनुसार संसदीय दलको नेता चयन हुने हो । पार्टीमा कुनै पनि जिम्मेवारीका लागि योग्य र सक्षम साथीहरू हुन । त्यसैले हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यू, जिम्मेवार पार्टीकर्मीहरूले उचित समयमा उपयुक्त निर्णय गर्नेछ ।
तपाईं पनि मुख्यमन्त्रीका एउटा दाबेदार हुनुहुन्छ ?
हेर्नुस, प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री बन्न संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा योग्य हुन । साथीहरूले मेरो नाउँ पनि अघि सारेको सही कुरा हो । पार्टीप्रति मेरो निष्ठा, समर्पण र संगठन निर्माण तथा विस्तारमा मैले निर्वाह गरेको भूमिकाकै कारणले मलाई उनीहरूले प्रस्ताव गरेको होला ।